Umthandazo weSiko Discover ▷️ Fumana kwi-Intanethi Online ➡️
Namhlanje siza kuthetha umthandazo wokholo, ebonisa ngokucacileyo ukholo, eqinisekisa ukunyaniseka esinako phambi kukaBawo wethu ongunaphakade. Kulo lonke eli nqaku siza kukubonisa intsingiselo yesi sivakalisi kunye nokubaluleka kwaso.
Xela ukholo lwakho phambi kweNkosi ngomthandazo wesivumo sokholo.
1 Imvelaphi yomthandazo wokholo
1.1 Intsingiselo yeSivumo
2 Ukubaluleka komthandazo wezenkolo
Imvelaphi yomthandazo wokholo
Ngenkulungwane yesi-1967 umgaqo wawusele ufundwa, nangona i-Holy See yayingayamkeli ekuqaleni. Nangona kunjalo, lo mthandazo unamandla wenziwa nguPopu Paul VI kwiCawa yamaKatolika, ngakumbi kuNyaka Wokholo phakathi kuka-1968 no-XNUMX, iholide yokukhumbula ukubulawa kuka-Saint Peter kunye no-Saint Paul e-Roma.
Igama elithi '' Credo '' ligama lesiLatini elithetha ukuthi '' Ndiyakholelwa '' kwaye yenye yemithandazo eyeyona ithandwa kakhulu phakathi kweCawa yamaKatolika. Ukuthandwa kwayo kulele kwintsingiselo, kuba kugxininisa ukholo lwamaKristu, kuvakalisa ukuqinisekiswa kwabo bakholelwa ngokupheleleyo kwilizwi layo kwaye banqwenela ukuhamba ecaleni kwayo.
Inkolelo ngokwayo sisishwankathelo sayo yonke into ethembekileyo yenkolo yamaKatolika ekholelwayo kwaye yahlulwe yangamacandelo amathathu:
Ekuqaleni ithetha ngoThixo uSomandla njengoMdali wehlabathi.
Emva koko uthetha ngonyana wakhe uYesu Krestu nangokuhlangulwa kwabantu.
Okokugqibela, qinisa iinkolelo zethu, kuMoya oyiNgcwele nasekungcwalisweni kwethu.
Amabinzana enza lo mthandazo akanyanzelekanga ukuba abe namabinzana athathwe eBhayibhileni, kuba uninzi lwazo ndiyakholelwa ukuba lwenziwe ngeenjongo kunye nemiyalezo evela kwincwadi engcwele, ngokuthe ngqo nangokulula ukukhumbula amabinzana. La mabinzana abhekisa kumaxesha ebhayibhile ngokwawo kwaye aguqulelwa kwinjongo ecace gca nangakumbi.
Umzekelo: Ukuqala kwe- umthandazo wokholo "Ndiyakholelwa kuThixo uYise, usomandla, umdali wezulu nomhlaba" kutsalwe kwiGenesis (1: 1) ngokuthe ngqo, ibinzana lithe "Ekuqaleni uThixo wadala izulu nomhlaba."
Qinisekisa iinkolelo zakho phambi koThixo uSomandla, funda lo mthandazo yonke imihla ngendlela ethembekileyo kwaye usondele ngakumbi kuBukumkani bamazulu.
La umthandazo wokholo Inamanqaku alishumi elinambini enza uphawu lwabapostile:
Ndiyakholelwa kuThixo uYise, usomandla, umdali wezulu nomhlaba. '' Kukuqala komthandazo, kwesi siqendu kusikhumbuza ukuba iNkosi uSomandla inguMdali wendalo iphela, njengoko kubonisiwe kwiTestamente eNdala. Nangona kunjalo, oko kusikhumbuza ukuba uThixo nguBawo wethu, apha singena kwiTestamente eNtsha apho basifundisa khona ukubaluleka kwayo kwaye sisikhumbuzo se ''UPadre NuestrouYesu Kristu wasifundisa oko.
"Ndiyakholelwa kuYesu Krestu, okuphela konyana wakhe, iNkosi yethu." Siyakholelwa kumesiya owayethunyelwe nguThixo, ababalisa ngaye kwizibhalo, okuphela konyana kaBawo ongunaphakade. Apha siqonda ukuba uYesu uyiNkosi yethu.
'' Ukuba wakhawulwa ngomsebenzi kunye nobabalo loMoya oyiNgcwele, wazalwa nguMariya oyiNtombi Enyulu. Nangona uYesu Krestu wazalwa ngendalo kaThixo, ukwanguNyana womntu kwaye umelwe ngokupheleleyo yimeko yethu yobuntu, Oko kukuthi, nguThixo owenziwe ngumntu.
"Waphatheka kabuhlungu phantsi koPontiyo Pilato, wabethelelwa emnqamlezweni, wasweleka wangcwatywa". Eli binzana lichaza konke ukubandezeleka awayenako ukuze ahlale nathi kude kube sekupheleni. Enkosi ngedini lakhe, ukufela uluntu, uYesu Krestu usindisa umntu kwaye abonise uthando lwakhe olukhulu kuthi.
'' Wehla waya esihogweni '' Xa wasweleka ebethelelwe emnqamlezweni, uYesu wehla waya kwelabafileyo, injongo yakhe yayikukusindisa lonke uluntu, kokubini amadoda ezizukulwana ezidlulileyo kunye nabo bamlandelayo.
'' Ngosuku lwesithathu uvukile kwabafileyo, wenyuka waya ezulwini, kwaye uhleli ngasekunene kukaThixo uSomandla uYise '' Kwiintsuku ezintathu emva kokufa kwakhe uYesu Kristu uyavuka, ke eli binzana libhekisa kulo mzuzu ukubuyela koNyana kuYise.
"Ukusuka apho kufuneka eze kugweba abaphilayo nabafileyo." Apha ubhekisa kumzuzu womgwebo wokugqibela. Kwangokunjalo, kulawula indlela eya eBukumkanini bamazulu kwabathembekileyo abakholelwa kuyo.
'' Ndiyakholelwa kuMoya oyiNgcwele '' Sibonisa uthando lwethu olupheleleyo kunye nokukholelwa kuMoya oyiNgcwele kunye nobukho bakhe phakathi kwawo onke amaKristu amamkelayo ngobhaptizo.
'' ICawe eNgcwele yamaKatolika '' Siqinisekisa inkolelo yethu kwiCawa kunye nomzimba kaKristu.
'' UMthendeleko waBangcwele '' Asiphili nje ngombono wethu, kodwa siyadibana nabanye. Singamadoda siqhuba umthendeleko, abantu bakaKristu abajongi kule nkolo kuphela kodwa kuwo onke amaKristu emhlabeni.
'' Ukuxolelwa kwezono '' UYesu wasifela, ukuze asisindise. Kwesi sivakalisi siyangqina inkolelo yokuba wafela ukuxolelwa kwezono zethu, njengophawu lwenceba yakhe engapheliyo.
'' Uvuko lomzimba kunye nobomi obungunaphakade. Amen '' Ukufa linyathelo nje elinye esilithatha kubomi obungunaphakade. Sikholelwa ngokunyanisekileyo ukuba siyakuvuswa sisenyameni yakhe, kwinto yomntu ngamnye.
Ukubaluleka komthandazo wezenkolo
Sele siyazi intsingiselo ye- umthandazo wokholo, ukuba sijonga okomzuzwana kuyo yonke into esiyakholelwayo, sinokukuqonda ukubaluleka kweNkosi yethu uThixo, njani kunye neyakhe infinito uthando, wakwazi ukunikela ngonyana wakhe uYesu Krestu ukuba asifele.
Ubomi bethu bemihla ngemihla kufuneka bubonakalise ngokwenyani ukuba siyakholelwa ngokwenene kuThixo, kufuneka sibonise ukhuseleko lokuba sinamandla onke asijongileyo sonke ngabanye. Lo mthandazo yindlela yokuvuma ukholo lwethu phambi koThixo.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngendlela yokubiza umthandazo wokholoNdiyakumema ukuba ubone le vidiyo ilandelayo: